Indlela yokupheka i-feijoa ekhaya - Iindlela zokupheka eziphambili ngokupheka isithombe
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako I ziqhamo Feijoa
I-autumn yithuba apho amashalofu esitolo ezaliswa ziziqhamo ezahlukeneyo kunye namajikijolo. I-Feijoa ingomnye wezityalo ezithandwa kakhulu, iziqhamo zazo ezisetyenziswa kakhulu ekulungiseleleni izitya ezahlukeneyo. Ngaphambili, lesi sityalo esingavamile sakhula kuphela kumazwe athile-eArgentina, e-Uruguay naseBrazil, kwaye ngoku ifunyanwa phantse nawuphi na urhulumente.
UFijoa ucebile kakhulu kwi-acid acid kunye ne-iodine. Ukongezelela, kuphucula kakhulu ukutyalwa kunye nokunyusa umzimba. Abahlengikazi banamhlanje baye bagxininisa ngokubaluleka kwesi siqhamo esingathandekiyo, ngoko baninzi banokugqiba okokuba bapheke kwi-feijoa kwintsapho yabo.
Yintoni elungiselelwe esuka ku-feijoa?
Nangona esi siqhamo singenangqondo kwaye sisetyenziswa ngokubanzi ekuphekeni kungekudala, namhlanje kukho uluhlu olukhulu lweitya apho ungayisebenzisa khona. Ngoko, ukupheka njani i-feijoa? Ngokuqhelekileyo, abahlengikazi banamhlanje basebenzisa esi siqhamo ukulungiselela umjelo, ongayidla naliphi na ixesha lonyaka. Ukongeza, isetyenziselwa ukwenza i-compote, i-sauces ehlukahlukeneyo, i-puddings kunye ne-jams.
Iiphambili ezintathu zokupheka eziphambili zokupheka feijoa
Ukuba awukwazi into onokuyipheka esuka e-feijoa, ngoko le nqaku iya kukunceda! Indlela elula ukuyilungiselela esi siqhamo iyinto yokuqhayisa.
Jam ngaphandle kwonyango lokushisa
iziqhamo ze-feijoa - 1 kg
ushukela - 500 g
Ndihlambe ngokukhawuleza isiqhamo sam kwaye uyicime.
Gaya i feijoa kwi-blender.
Yongeza ishukela kwisiqhamo sesuphu uze udibanise kakuhle.
Sigcina i-jam efrijini.
Le recipe ibonisa indlela yokupheka i-feijoa ngaphandle kwemigudu emininzi nje!
I-Sauce esuka e-feijoa
Le recipe iyanceda abo bendlukazi abathanda ukutshatyalaliswa intsapho yabo kunye neendwendwe kunye nezitya zangaphandle. I-sauce esivela kwezi ziqhamo iya kuba yincinci kwaye ihle.
iziqhamo ze feijoa - 1 pc.
i-tangerine - 4 ii-pcs
Gweba isiqhamo kwi-peel kwi-blender.
Yongeza umxube wokuhlwaya kunye neoli yeoli kunye nomxube wezityalo-konke ukula.
Siphalazela inyama yomsila imizuzu embalwa ngaphambi kokuba iphekwe ngokupheleleyo.
Compote kusuka feijoa
Ukuba ukhangele okokupheka kwi-feijoa ebusika, okokukhethwa kukho okukhethileyo kuya kuba yi-compote. Ukuqhelaniswa kwesi siqhamo akuyona nje into ekhethileyo, kodwa iyanceda, kwaye ukulungiselela kwayo kuthatha ngaphantsi kweyure.
iziqhamo ze-feijoa - 0,5 kg
amanzi - 2 l
i-citric acid - 0.5 tsp.
Iziqhamo kufuneka zihlanjululwe kwaye zinqunywe zibe ziincinci ezincinci, ezibekwe kwisikhwama esikhulu kwaye zityhala malunga neekitha ezimbini zamanzi. Yizisa kwi thumba.
Kwi-compote yongeza ushukela, i-citric acid ne-sinamon.
Pheka umxube umzuzu wama-25-30.
Isiphuzo esinjalo asifanelekanga kuphela kubadala, kodwa siya kuba yinto ethanda kakhulu kubantwana abancinci.
I-Feijoa izakhiwo ezixhamlayo: ukusetyenziswa nokulimala kwesiqhamo feijoa
I-salsa yezithelo kunye ne-feijoa
Jam kusuka e feijoa
Ioli e-Olive ukusuka kumanqaku elula
Izitenja zenkukhu ezidibeneyo
I-strawberry jam kunye ne-basil
Indlela yokufakela amakhowe amhlophe: ukungafundi ukufunda ukuvuna
Ingqele ithintela njani ukukhulelwa?
Unyango kunye nokuthintela ulwabizo kumachiza omntu